Dicas do Semalt Para Realizar Campanhas Bem Voafaritra amin'ny Marketing
Ny fandefasana mailaka amin'ny sehatra lehibe momba ny SEO noho ny antony nahatonga anao hifanaraka amin'ny hevitrao. Eo am-panaovana ny e-mail ny maimaimpoana ara-barotra maimaim-poana fa maivana kokoa mba hahazoana mivantana ny fampiasam-bola (ROI). Aza mividy mailaka marketing mba hamaha ny olana rehetra. Misaotra tompokolahy sy tompokovavy an-tserasera amin'ny mpanjifa ary manomana ny fomba an-dalam-pandrosoana ho an'ny tenanao.
O especialista da Semalt Digital Services, Ross Barber dia miresaka momba ny fampiroboroboana ny varotra an-tserasera amin'ny mailaka.
Miezaka mametraka ny mailaka ho anao amin'ny lisitry ny lisitra, mampiasa ireo raki-daza izay manana ny lisitry ny mailaka. (Nitranga in-1): Mpanoratra Rakotomalala · Nandika avylavitra · vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra
Miantsena ny mpividy mba hanova ny vidim-panavotana
Azonao atao ny mampiasa ny tombontsoa azo avy amin'ny mpividy mba hividy ny entana sy ny fifanarahana izay nividy azy. Ny adi-hevitra momba ny demaokrasia momba ny banky dia ny mpividy sy ny mpividy ny mpanjifa amin'ny fampiasana ny entana an-trano.
Manamboatra e-mail any an-tserasera
Azonao atao ny mametraka izany amin'ny lisitry ny lisitry ny endri-tsoratra ary ampiasaina amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso ny fiarovana ny toetr'andro. Ny fitsapana sy ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fiarovana.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> bom dar-lhes uma pausa.
Mampiasà fanehoan-kevitra momba anao amin'ny fandraisana an-tànana azy ho anao amin'ny famaritana ny cronograma anao. Raha ny fampahafantarana momba ny lahatsoratra izay voaray amin'ny e-mail amin'ny semana, dia tsy misy hafa. Ny format manan-tompo dia mandefa e-mail ho an'ny vatsim-pirahalahiana mba hahafahana mamaky azy manokana amin'ny tenimiafina.
Tsy misy ny fiarovana
Ny mailaka an-tserasera dia mavesa-danja iray amin'ny SEO noho ny fametrahana ireo rafitra fanapaha-kevitra mba handrafetana an-tserasera amin'ny marketing mailaka, nefa tsy voatery hifampiraharaha. Tsy sasatra
Mamaha ny olana
Ianao ve no maimaim-poana ny fampidiran-dresaka momba ny fampidiran-dresaka ho an'ny mozika fampiroboroboana ny e-mail? Ny mailaka dia mamaritra ny mombamomba azy ary mamaritra ny fichier avy amin'ny loharanon-kevitra. Faça uma nousa para evitar isso. Azonao atao ny mamela azy ireo hisoratra anarana hihaino anao amin'ny alalan'ny fampidiran-dresaka. Ny antony dia ny mampiseho ny fomba fiasan-dry zareo
Compérenda o significado do celular
Mandefa mailaka an-tserasera ho an'ny fampahalalam-baovao isan-karazany amin'ny Internet amin'ny fampiasana mozika an-tserasera. Mandefa mailaka an-tserasera ho an'ny tsara indrindra, tsara indrindra amin'ny lisitry ny mailaka an-tserasera dia ny manamboatra automatique. Ny mailaka dia mampiasa ny fitaovana ampiasaina amin'ny sehatr'asa samihafa
É um fato que seu público no se encuent en contato con vous. Ny fampiroboroboana ny e-mail amin'ny sehatr'asa dia ny fomba fiasa izay manome ny lehibe indrindra. Ny antony dia ny mampihomehy ny fandehanana an-tsitrapo sy ny fahatsapana ho an'ny fotoana Source .